म बिजयको दिन कुर्दैछु – YesKathmandu.com
म बिजयको दिन कुर्दैछु
शनिबार १८, बैशाख २०७३
माधवप्रसाद नेपाल, पुराना ब्यवसायी हुन् । काठमाण्डौमा वसेर मालवहाक गाडी सञ्चालन गर्दै ब्यवसाय गरेको उनको पुरानो अनुभव छ । १५ बर्ष भन्दा बढी समय यो क्षेत्रमा खर्चेका नेपाल सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै कृयाशिल छन् । हक्की स्वभाव र ब्यवसायलाई कर्म मान्ने नेपाल तराई यातायात ब्यवसायी संघमा केही नयाँ काम गर्ने योजनाका साथ आएका हुन् । संघको उत्तर क्षेत्रमा हुने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने नयाँ योजनासहित ओमकृष्ण कार्कीको टीमबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार वनेका नेपालको नयाँ योजनासहितको वार्तालाप :
ब्यवसायीलाई थप जिम्मेवारी तुल्याउँदै पेशालाई मर्यादित बनाउन मेरो उम्मेदवारी आएको हो । व्यवसायिक वातावरण, ब्यवसायिक जिम्मेवारी, ब्यवसायिक समझ्दारी र सोही अनुरुपको ब्यवसायीक संघ निर्माण गर्नका लागि मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु ।
अनि उत्तर क्षेत्रको उपाध्यक्ष नै किन हुनु पर्ने नि ?
यो पदको परिभाषित जिम्मेवारी भूगोल अन्तर्गत नै हो । काठमाण्डौ केन्द्रीत ब्यवासायी नै यो पदमा उपयुक्त हुने सवैको बुझाई छ । जुनसुकै मालवहाक गाडी पनि काठमाडौं आउने भएका कारण यहाँ हुने कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि राजधानी केन्द्रीत पदाधिकारीको आवश्यकता पर्दछ । सो का लागि नै यो पद सिर्जना भएका कारण पनि काठमाण्डौंमा वसेर ब्यवसाय गरेको म जस्तो मान्छे यस पदको लागि ठीक हुन्छ । उत्तर क्षेत्रको उपाध्यक्ष भनेर परिभाषा नै गरेको कारण पनि राजधानीमा वसेर काम गरेकाले मैले यो पदमा दावी गरेको छु ।
म काठमाडौंमा रहने भएका कारण यो पदको पहिलो दावेदार भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो भूगोलमा पर्ने जुनसुकै समस्यालाई समाधान गर्न मेरो पहल उल्लेख्य हुने मेरो ठम्याई रहेको छ । र, यो प्रकारको ब्यक्ति म मात्र उम्मेदवार भएका कारण पनि मतदाताले मलाई विजय गराउनु हुने छ भन्ने बिश्वास गरेको छु ।
संघलाई अघि बढाउने तपाईका योजना के छन् ?
कुनै पनि संघ संस्थाको उदेश्य त्यति बेला प्राप्त हुन्छ, जति वेला परिभाषा अनुसारको जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ । एउटा बिषयको बिज्ञलाई अर्को बिषयमा काम लगाउँदा त्यो काम सम्पन्न हुनै सक्दैन । जसले जे गर्न सक्छ उसलाई सोही अनुरुपको योजना निर्माण गर्न दिन सके उसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । कसले कति योगदान गरेको छ भन्दा पनि ईतिहास बाट पाठ सिक्दै नयाँलाई जिम्मेवारी दिँदै लैजाने हो भने यस प्रकारका संघसंस्थाले गति लिन सक्ने मेरो बुझाई छ । संस्थामा वसेर भन्दा पनि उसले कति योगदान दिन सकेको छ । त्यसको आधारमा मानिसको मूल्यांकन हुने आम सत्य हो । त्यस कारण पनि नव प्रवेशीको हैसियतमा संस्थालाई अझ गतिशिल रुपमा अघि बढाउने मेरो योजना रहेको छ । निश्चित कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने मेरो योजना रहेको छ । मेरो टिमको नयाँ योजना अनुसार अघि बढ्दै जिम्मेवारी वहन गर्नेमा सवै मतदातालाई विश्वस्त तुल्याउँछु ।
राजधानी केन्द्रीत समस्या उठाउनु भयो । के छन् त ?
राजधानी हरेक ब्यवसायीको बाध्यता हो । यहाँ नआउने हो भने ब्यवसायले पूर्णता पाउँदैन भन्दा पनि हुन्छ । यस संघमा आवद्ध मालवाहक गाडीहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी काठमाडौं आउँने गर्छन । तर, संघको काठमाडौंमा उपस्थिति न्यून छ । कर्मचारीका भरमा मात्र काठमाडौंको कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको छ । यहाँ आईपर्ने समस्या समाधानका लागि बाहिरवाट नै पदाधिकारी आउनु पर्ने अवस्था छ । राजधानी भएका कारण पनि काठमाडौंको उपस्थिति गतिलो हुनु आवश्यक छ । ब्यवसायीलाई मेरो संघ काठमाण्डौंमा पनि छ भन्ने महसुुस दिलाउन पनि काठमाडौं केन्द्रीत पदाधिकारीको आवश्यकता हुन्छ नै ।
त्यसो त काठमाडौंमा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप रहेको छ । चापका कारण बेलावेला बिभिन्न समस्याहरु आईरहन्छन् । मालवाहक गाडी भएका कारण अत्यधिक गाडीको चाप हुने ठाउँका समस्या आउनु
स्वाभाविक पनि हो । यी सवै समस्या समाधानका लागि काठमाण्डौमा नै केन्द्रीत मान्छेको आवश्यकता हुन्छ । काठमाण्डौमा भएको समस्या समाधान गर्न बाहिरबाट पदाधिकारी आउनु आफैमा खर्चिलो तथा समयका हिसावले पनि बढी लाग्छ नै ।
तपाईको कार्य अनुभवका वारेमा बताउनु पर्दा के भन्नु हुन्छ ?
हो, म पहिलो पटक यस संघमा निर्वाचन लड्दै छु । जीत या हार मेरो ठूलो प्रतिष्ठाको बिषय होईन । तर, यो संघ बिरगंज,सिमरा मात्र होईन देशब्यापी रुपमा छ भन्ने पहिचान गराउन पक्कै सहज हुनेछ । पचासौं लाख लगानी गरेको मालवाहक गाडी गुड्ने हरेक ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति गराउने मेरो पहल हुनेछ । मेरो उम्मेदवारी कुनै ब्यक्ति बिरुद्ध पनि होईन । परिभाषित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नु नै मेरो उद्धेश्य हो । त्यसोत धेरै जिम्मेवार तथा बिशिष्ट ब्यवसायीले नै मलाई समर्थन गरेर उम्मेदवार हुन आग्रह गरेका कारण नै मैले उम्मेदवारी दिन लागेको हो ।
ओमकृष्ण कार्कीसहितको टीमले भूगोल अनुसारको जिम्मेवारी मलाई प्रदान गर्न लागेकोमा काठमाडौंको तर्फबाट बिजयीको शुभकामना दिँदै यो टीमलाई मतदान गर्न अनुरोध गर्दछु ।
‘ओलीजी पृथ्वीनारायण शाहपछि तपाई मात्रै राष्ट्रबादी हो ?’
‘मन्त्री हुनेमा विश्वस्त थिएँ’
उमेर हदबन्दीबिरुद्धको आन्दोलन बिद्यार्थी राजनीति बिरोधी जत्थाको रुवाबासीमात्र हो
बाबुरामजीको भारत भ्रमणले वार्ता भएको होइन
मन्त्रीज्यू विश्व खाद्यको चामल घरमा दिए तपाई खान सक्नुहुन्छ ?
वालुवाटारमा गच्छदारले उपसभापति रोज्दा विमलेन्द्र निधि रुष्ट
आमाकै हत्या गर्ने यि कस्ता पुत्र
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन २६ फागुनमा